‘भद्रगोल’को युट्युब भ्यूज चोरी ! « Janata Samachar
‘भद्रगोल’को युट्युब भ्यूज चोरी !
प्रकाशित मिति : २० चैत्र २०७५, बुधबार १०:३५
काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आएको हास्यटेलिश्रृंखला ‘भ्रदगोल’को युट्युब भ्यूज चोरी भएको आशंका गरिएको छ ।
चर्चित हास्यटेलिश्रृंखलाको युट्युब भ्यूज चोरी भएको टेलिश्रृंखलाका लेखक तथा निर्देशक अर्जुन घिमिरे ‘पाँडे’ले आफ्नो फेसबुकमा राखेका छन् । उनका अनुसार युट्युबमा राखिएको ‘भद्रगोल’को २ सय ४ औँ श्रृंखलाको बाहिर देखाउने भ्यूज र भिडियो खोलेपछि देखाउने भ्यूजमा फरक आएको हो ।
अर्जुनले ‘भद्रगोल’को युट्युब भ्यूज चोरी भएको र त्यस्तो कार्य तत्काल बन्द गर्न अनुरोध गरेका छन् । साथै उनले आफ्नो आईटी टीम भ्यूज चोरी गर्ने व्यक्ति अथवा संगठन पत्ता लगाउने अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
के हो खास कुरा ?
‘भद्रगोल’ को आधिकारिक फेसबुक पेजमा राखिएको जानकारीलाई आधार मान्ने हो भने, मार्च २२ मा रिलिज भएको ‘भद्रगोल’को २ सय ३ भाग भोलिपल्ट साँझ सात बजेर ४ मिनेटमा बाहिरबाट हेर्दा ९ लाख ३१ हजार भ्यूज देखाएको छ तर सोही समयमा भित्र खोलेर हेर्दा ७ लाख ६१ हजार ५ सय ८८ भ्यूज देखाउँछ । एउटै समयमा बाहिर र भिडियो खोलेर हेर्दा देखिने भ्यूजमा २ लाखको हाराहारीमा घटेपछि भद्रगोलको टीमले यो कुरा बाहिर ल्याएको हो ।
भ्यूज चोरी हुने घटना भएको यो नै पहिलोपटक नभएको ‘भद्रगोल’ टीमको दाबी छ । ‘भद्रगोल’का श्रृंखला निर्देशक दिपक आचार्यका अनुसार यस्तो घटना एउटामात्र एपिसोडमा नभई पछिल्लो ३–४ हप्तादेखि लगातार चलिरहेको छ ।
युट्युबमा भ्यूज घटेपछि ‘भद्रगोल’को लोकप्रियता भने दर्शकमाझ अझै बढिरहेको छ । बालकदेखि बृद्धबृद्धाहरुले यसका हरेक एपिसोड रुचाउने गर्छन् ।
वियोगान्त कथामा प्रस्तुत गरिएको ऐना हेरी हेरी सार्वजनिक
काठमाडौं । ‘ऐना हेरी हेरी’ गीतको अफिसियल म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । यस गीतमा
अभय ढुंगेल र रेश्मा सुनुवारको ‘मार्यो मार्यो’ बजारमा
ओखलढुंगा । पूर्वेली लोकगीतका चर्चित गायक अभय ढुंगेलको नयाँ गीत ‘मार्यो मार्यो’ सार्वजनिक भएको छ
युवालाई गाउँमै रमाउने सन्देश दिँदै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाकोकृषि गीत सार्वजनिक
खोटाङ । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले युवाहरुलाई गाउँमै रमाउने सन्देश दिँदै कृषि गीत सार्वजनिक
सर्जक प्रशानको ‘लगन जुर्ने कहिले हो’ सार्वजनिक
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुका सर्जक प्रशान अलुङ राईको आधुनिक गित सार्वजनिक भएको छ । जिल्लाको नेचासल्यान